sosegado : မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီ
Posted by sosegado at 8/29/2010 09:07:00 PM
ချစ်ခွန်းဖွဲ့သီ ယုံကြည်ပါတယ် ..မေ...
ကိုတည်ငြိမ်အေး...ရေးဟန်က အမြဲသွက်ပြီး အသက်ဝင်တော့ ကိုယ်တွေ့လို့ပဲ အမြဲထင်မိတယ်...ဟ ဟ ၊ မရောက်တာ ကြာသွားတယ်ဗျာ...နောက်အပိုင်းမျှော်နေမယ်...
မျှော်ရပြန်ပြီ ကိုစိုးစီ....... မြန်မြန်ရေးနော်. ပရိသတ်အားပေးဖို့အသင့်ပါ။
ကိုကြီးကျောက် ဆီမှာ ကွန်မန့် ဖတ်လိုက်တော့ ကိုစိုစီတစ်ယောက် အမေရိကား ရောက်နေပြီလို့တော့ သိလိုက်သေးတယ်။
ကောင်းခန်းကို ဘာလို့ ကျော်ပစ်တာလဲဟင်။ :D
အင်း.. ဖတ်ရင်းနဲ့တော့ အတွေးတွေ လည်လည်နေမိတယ်... တကယ့်အဖြစ်လား..၀တ္ထုလားပေါ့.....း))... အောက်ဆုံးမှာ ၀တ္ထုလို့သာရေးလို့ ယုံရတယ်.. တကယ့်အဖြစ်လိုပဲ...
အဲဒီလို ရှည်ရှည်လေး ရေးချင်လိုက်တာ......
အခု ဈာန်တွေက လွှင့်ပျံနေတယ်.......
ညိုပြာရီမှောင်ဂွတ်ထော်၊ တို့ နှင်းမဲတူဒေဝီ တို့နဲ့ လျှောက်လည်တဲ့ ဇတ်လမ်းရှာအုန်းမှ
ယုံဘူးယုံဘူး... ဝတ္ထုဇာတ်လမ်း ဆိုတာ ယုံဘူး ခရီးတွေ ထွက်နေရတယ် ဆိုပြီး အချစ်ဟောင်း လေးနဲ့ လျှောက်လည် နေတယ်ပေါ့လေ တိုင်ပြောမယ် မန်းလေးက မဟူရာမင်းသမီး လေးကို တိုင်ပြောမယ်
ကိုစိုစီ ပုံစံယူပြီး လက်ရှိတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုနာမည်ပေးရမလဲ စဉ်းစားမိသည်၊ ဘုဘုဘောက်ဘောက် ဆို ကောင်းမလား၊ Anyway welcome to NY.
ဖတ်လို့ကောင်းပါသည်၊ ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတစ်ယောက်သောသူနှင့်အတူသွားချင်လာတယ်၊ အိမ်မက်မက်ကြည့်တာပါ။ ယမင်း
Liberty ပုံကိုဘာလို့ ဖင်ဘက်ကရိုက်ထားတာလဲ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်
ချစ်သူကောင်မလေးတွေကို နာမည်လေးတွေပေးထားတာ မိုက်တယ်။ များလွန်းအားကြီးလို့ ရောကုန်ရင် ဒုက္ခနော်။ ကိုယ်တွေ့ဇာတ်လမ်းလေးလိုပဲ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။
နာမည် လေး က မျက်ဝန်းလဲ့ ပြာရည် ဆိုတော့ 
ကဗျာ ဆန်ဆန် လေးပါ ပဲ။
နာမည် နဲ့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့လေးက နွဲ့ နွဲ့လေး
နဲ့ဖတ် လို့ကောင်းပါတယ်။
ခဏ နားပါအုံးမည် ဆိုတော့ ..
အင်း လေ စောင့် ရအုံးတော့ မှာပေါ့နော်။
ကိုယ်တွေ့လေးများလားလို့လဲ အထင်တကြီး ရှိရင်းပေါ့လေး)
မတွေ့တာကြာတဲ့ချစ်သူကို ပြန်တွေ့တော့ ဘယ်လိုများ ခံစားခဲ့ရပါလိမ့်.....
ကိုဆိုဆီရေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေက အမြဲတမ်း စိတ်ဝင်စားစရာတွေချည်းပါလား....
ခရီးသွားရင်း ရောက်တဲ့ နေရာလေးတွေကို ဇာတ်လမ်း ဖွဲ့တာဟာ သုတရသ အပြည့်ပါပဲ။
ရည်းစားဟောင်း ဇာတ်လမ်းဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ပါပဲ။
တောင်မြောပါသွားတယ်-အဟုတ် - - -
ခေမရဉ် ရှမ်းဆိုင်ကိုလည်းလွမ်းတယ် - - -
ငယ်ချစ်ဦးအနမ်းတွေကိုလည်းတမ်းတတယ် - - -
တည်ငြိမ်အေးတစ်ယောက်တော့ငယ်ချစ်ဦးနဲ့ အနမ်းတွေဝေ-အလွမ်းတွေသည်နေကြတယ်ပေါ့လေ -
ဟားဟားဟား-အားကျတယ်ဗျာ-ဆက်ဆရာရေ - -
ဆက် - - -
တကယ့်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်လို့ပဲ ထင်နေတယ်နော်.... :)
မနေ့ကထဲကဖတ်ပြီးသွားတာ .... မအားတာနဲ့ မမန့်ခဲ့ရဘူး... ပျော်နေတယ်ပေါ့လေ... မျက်ဝန်းလက်ပြာရီနဲ့ တွေ့လို့
တကယ်လားလို့ ။ ၀တ္တူဖြစ်နေတာကိုး။ နောက်အပိုင်းဆက်ရန်ကို စောင့်အားပေးနေပါတယ်။
ဆက်ရန်လေးဖတ်ရမလားလို့ လာတာ ၃ ခါရှိပြီ။ ဟီး ဟီး မရှိသေးတော့ ရှိတာ ထပ်ဖတ်သွားတယ်။ အရေးကောင်းတော့လည်း ဖတ်လိုက်ရင် အသစ်လိုပဲ။ ကောင်းတယ်။